- यमन मुदेल | काठमाडाैं, फागुन १७
कञ्चनपुरको पुनर्वासकी कौशिला बुढा थापा अढाइ वर्षदेखि सिलाइकटाइ पेसामा व्यस्त छिन् । घरको बरन्डामा मेसिन राखेर आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेकी छन् । घरमै बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदा खुसी भएको उनी बताउँछिन् ।
उनको परिवारमा श्रीमान् र एक छोरी पनि छन् । श्रीमान् कमाइ गर्न भारत गएका छन् । श्रीमान्‌को कमाइले मात्र खान नपुगेपछि कौशिला आफैँले सिलाइबुनाइको काम थालेकी हुन् । बिनासजावटको फुस्रो घरमा उनीहरूले सिलाइबुनाइ व्यवसाय सञ्चालन गरेर रङ्गिन सपना हुर्काइरहेका छन् ।
बाल्यकालमै वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी कौशिला श्रीमान्‌सँग खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमाथि श्रीमान्‌ले रक्सी खाने बानी थियाे । बिस्तारै कौशिला श्रीमान्‌सँग खुल्न थालिन् । तर, त्यसबखत श्रीमान् कमाइ गर्न भन्दै भारत गए ।
भारत गए पनि उनका श्रीमान्‌को बानीमा सुधार आएन । जाँडरक्सी खाने बानीलाई त्याग्न सकेनन् । त्यसैले श्रीमान्‌लाई जाँडरक्सीको कुलतबाट छुटाउन कौशिला पनि सँगै भारत गइन् । तर, उनी असफल भएर घर फर्किइन् । नेपाल आउँदा उनको घरमा खानपिनका लागि अन्न थिएन । केही दिन छिमेकीसँग मागेर छाक टारिन् । छोरीलाई पनि मागेरै खुवाउनुपर्ने अवस्था उनको थियो ।
तर, सधैँ मागेको भरमा किन छाक टर्थ्यो र ? त्यसपछि कौशिला कामको खोजीमा लागिन् । भन्नासाथ काम पनि कसले दिन्थ्याे ? कामको खोजीमा हिँड्दै गर्दा उनको सहारा बन्न आइपुग्यो, निड्स नेपाल । उनी निड्स नेपालद्वारा सञ्चालन भएको तीनमहिने सिलाइबुनाइ तालिममा सहभागी भइन् ।
निड्स नेपालले तालिम मात्र दिएन, सिलाइबुनाइका लागि आवश्यक २० हजार रुपैयाँबराबरको उपकरण पनि किनिदियो । ‘अढाइ वर्षअघि मेरो पारिवारिक अवस्था निकै दयनीय थियो,’ उनले भनिन्, ‘पेटभरि खान पनि छिमेकीको घरमा माग्न जानपर्थ्यो । कति रात त भोकै बस्नुपर्‍यो । अहिले छिमेकीलाई आपत् पर्दा सहयोग गर्न सक्ने भएकी छु । यसैमा खुसी छु ।’
‘चाडपर्व आउँदा मीठो खानाभन्दा पनि पेटभरि खान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘मीठो खाना र नयाँ कपडा त सपनाजस्तै लाग्थ्यो । कपडा धुनका लागि साबुन किन्ने पैसा हुुँदैनथ्यो । पानीको भरमा मात्र धुनुपर्थ्यो ।’
साथमा छोरी भएकाले कौशिलालाई तालिममा जान पनि समस्या थियो । यद्यपि घरको काम सकाएर उनी सिलाइ तालिममा सहभागी भइन् । समय मिलाएर सिकेको तालिमले आज जीवनको रूप नै बदलेको उनी बताउँछिन् ।
सिलाइ पेसालाई व्यवसाय बनाएपछि अहिले दुईवटा सहकारीमा पैसा बचत गर्दै आएकी छिन् । हिजोआज सिलाइबुनाइको काममा उनलाई भ्याइ–नभ्याइ छ । उनले तीनमहिने तालिम लिएपछि एक महिनासम्म कपडा सिलाउन आउनेहरूको नि:शुल्क काम गरिदिइन् । हाल उनले बजारमूल्यभन्दा सस्तोमा कपडा सिलाउने गरेकी छिन् । ‘मैले अरुकोमा भन्दा सस्तोमा सिलाइरहेकी छु । यसले मेरो घरखर्च मजाले टरेको छ । महिला सधैँ पुरुषको आडमा मात्र बाँच्छन् भन्ने कुरा तोड्न सफल भएकी छु,’ कौशिलाले शिलापत्रसँग भनिन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १७, २०७८, ११:५६:००